SKU: 1431697-94-7. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
Lorcaserin HCL အမှုန့် 400 မီလီဂရမ် / mL ထက် သာ. ကြီးမြတ်ရေထဲမှာဖျော်နှင့်အတူ Off-အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်အဖြူသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို BELVIQ XR တက်ဘလက် 20.8 ညီမျှပုံဆောင်ခဲ lorcaserin Hydrochloride hemihydrate ၏ 20.0 မီလီဂရမ်, lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်, အောက်ပါမလှုပ်မရှားပါဝင်ပစ္စည်းများ mg ပါဝင်ပါတယ်: microcrystalline cellulose အဲန်အက်ဖ်; mannitol USP; 2208 USP hypromellose; ethylcellulose အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြား Type B အဲန်အက်ဖ်; 2910 USP hypromellose; colloid ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အဲန်အက်ဖ်; polyvinyl အရက်သေစာ USP; polyethylene glycol အဲန်အက်ဖ်; တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် USP; talc USP; FD & C ကအဝါရောင် #6/ နေဝင်ချိန်အဝါရောင် FCF; အလူမီနီကန်; သံအောက်ဆိုဒ်အဝါရောင်အဲန်အက်ဖ်; သံအောက်ဆိုဒ်အနီရောင်အဲန်အက်ဖ်; နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ် stearate အဲန်အက်ဖ်။
Lorcaserin HCL အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ကသိရန်လိုအပ်သည် 20 အရေးအပါဆုံးအရာမြား